Box.Com फाईल सेयरिंग सजिलो बनाउँछ
सम्भावितहरू, ग्राहकहरू वा व्यापार साझेदारहरू मार्फत जानकारीको फाईलहरू पठाउँदा कहिले सीमित महसुस गरे? FTP वास्तव मा एक लोकप्रिय या उपयोगकर्ता को अनुकूल विकल्प को रूप मा पक्रेन कहिल्यै, र ईमेल एट्याचमेन्ट को आफ्नै सीमितता र बाधा छ। आन्तरिक फाइल सर्भरमा साझेदारी डाइरेक्टरीहरूसँग सीमित पहुँच र आईटी टीमहरू आन्तरिकको लागि अधिक काम बनाउँदछ।
को उदय क्लाउड कम्प्युटिङ अब एक सुविधाजनक समाधान प्रस्ताव गर्दछ, र बिभिन्न क्लाउड आधारित प्रस्तावहरूका बीच सामग्री अनलाइन भण्डारण गर्न, प्रबन्ध गर्न र साझा गर्न अनुमति दिन्छ, ईमेल पठाउन जत्तिकै सजिलो छ, हो पेटी। के बाकसलाई बाँकीबाट छुट्याउँछ यसले दुई आधारभूत, अझै समय-परीक्षण सिद्धान्तहरूलाई यसको अद्वितीय बिक्री प्रस्तावको रूपमा उपयोग गर्न सक्ने क्षमता हो - सरलता र गति.
बक्सले सामग्री अनलाइन भण्डारण गर्न र सहयोग गर्न आवश्यक सबै चीज प्रदान गर्दछ। खातामा खोल्नको लागि केहि आधारभूत विवरणहरू टाइप गरेर र त्यसपछि फोल्डरहरू, मिडिया फाइलहरू, साझेदारी गरिएको अनलाइन कार्यक्षेत्रमा तान्ने यो सबै लिन्छ। केवल ईमेल वा तत्काल सन्देश मार्फत फोल्डर स्थानको लिंक पठाउँदै बक्स वा तपाईंको ईमेल क्लाइन्टबाट, अरूलाई हेर्न, सम्पादन गर्न, वा फाइलहरू अपलोड गर्न, सामग्रीमा कुराकानीमा संलग्न गराउन र अधिकका लागि अनुमति दिन्छ।
बक्सले उन्नत र जटिल विकल्पहरूलाई उल्लेखनीय सरल बनाउँदछ। उदाहरण को लागी, यो नयाँ साझा अपलोड लिंक को लागी समान साझा लिंक को उपयोग गरेर संस्करण नियन्त्रण निर्बाध बनाउँछ। खाता मालिक सामग्रीमा केन्द्रित घटनाहरूको विस्तृत, वास्तविक-समय गतिविधि फिड हुन्छ। बलियो अनुमति विकल्पहरू र रिपोर्टिंग क्षमताहरूले सामग्रीमा पूर्ण नियन्त्रण प्रदान गर्दछ, र स्ट्रिंग ईन्क्रिप्शन र अन्य सुरक्षा सुविधाहरूले मूर्ख प्रूफ सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ। बक्स गुगल अनुप्रयोग र सेल्सफोर्सको साथ एकीकृत, र मोबाइल उपकरणहरूबाट पुन: प्राप्ति योग्य छ।
बक्स तीन संस्करणहरूमा आउँदछ: बक्सको लागि GB जीबी नि: शुल्क भण्डारणको साथ व्यक्तिगत, व्यापार को लागी बक्स, र उद्यम को लागी बक्स $ १ / / प्रयोगकर्ता / महिनामा २ GB सम्मको भण्डारण प्रत्येकको लागि।
बक्सले यसको सेवालाई लेबल गर्दछ सरल अनलाइन सहयोग। मलाई लाग्छ यो एक सानो विस्तारको अंश हो किनकि वास्तविक सहयोग क्षमताहरू अलि सीमित छन्; जे होस्, यो एक मजबूत इन्टरप्राइज-सक्षम फाइल साझेदारी प्रणाली हो जुन साना कम्पनीहरूले सुरू गर्न सक्दछन् रमार्फत उद्यमको माध्यमबाट विस्तार गर्न सक्दछन्। मार्केटि teams टोलीहरूले यो उपकरणलाई संगठित गर्न र प्रुफ, सामग्री र कम्पनीसँग सम्बन्धित अन्य कागजात साझेदारी गर्न अत्यन्त उपयोगी फेला पार्न सक्दछन्।
टैग: सहयोगफाइल साझेदारीअनलाइन सहयोगअनलाइन फाइल साझेदारीअनलाइन फाइल प्रणालीटीम सहयोग
म केहि समय को लागी बक्स प्रयोगकर्ता भएको छु। यसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सेवाहरूको केहि सुविधाहरू नभएको जस्तो कि ड्रपबक्स (एकका लागि एक विश्वसनीय डेस्कटप सिnc्क ग्राहक), मैले यसको अभावको लागि बनाएको भन्दा यसको सरलता बढी पाएको छु।
एउटा ठूलो सुविधा अतिरिक्त भण्डारण थप्नको क्षमता हो जब तपाईं अरूलाई सेवा सिफारिस गर्नुहुन्छ। प्रत्येक सिफारिश उपयोगकर्ता को लागी जो साइन अप गर्दछ, तपाइँ को लागी storage gigs अतिरिक्त भंडारण को लागी। म यस बिन्दुमा g० गिग (!) मा छु, त्यसैले म पूर्ण रूपमा बाक्समा लगानी गर्छु।